Idemokhrasi ayikwazi ukusebenza ngokuzimela. Ukuze abantu benze utshintsho bafanele bahlangane baze bazenze bazive. Urhulumente waseUnited States akazange akwenze oku kulula.
URobert Walker I-Getty Izithombe
Ulungiso Lokuqala kwiMithetho Yelungelo Lwamalungelo ase - US lucacisa ngokucacileyo "ilungelo labantu ngokudibanisa ukuhlangana, nokucela urhulumente ukuba alungiselele izikhalazo."
EUnited States v. Cruikshank (1876), iNkundla ePhakamileyo iguqula inqunywe yecandelo lokumangalelwa kwabamhlophe abamhlophe abahlawuliswe njengenxalenye yokubulawa kweColfax. Kwisigqibo sayo, iNkundla iphinda ithi ukuba amazwe awabophekanga ukuba ahloniphe inkululeko yendibano-isikhundla sokuba iya kuguqulwa xa ivumela imfundiso yokubandakanya ngo-1925.
E- Thornhill v. Alabama , iNkundla ePhakamileyo ikhusela amalungelo abasebenzi be-pickers ngokubhukuqa umthetho we-Alabama ondibaniselwano kwimibutho yokuthetha yamahhala. Ngelixa ityala lijongene ngakumbi nenkululeko yentetho kunokukhulula inkululeko yendibano nganye, inokuthi - njengento ebalulekileyo-ibe nefuthe kubo bobabini.
Isibhengezo seNkcazo soLuntu samaLungelo oluntu, isiseko sokusungula umthetho wamazwe ngamazwe, sikhusela inkululeko yentlanganiso kwiimeko ezininzi. Isiqendu 18 sithetha "ilungelo lokukhulula ingcinga, isazela kunye nenkolo; eli lungelo liquka inkululeko yokutshintsha inkolo yakhe okanye inkolelo yakhe, inkululeko, nokuba yedwa okanye ekuhlaleni nabanye " (ukugxininisa kwam); Inqaku 20 lichaza ukuba "[e] uqobo unelungelo lenkululeko yentlanganiso kunye nobudlelwane" kwaye "[o] unokunyanzeliswa ukuba abe ngumbutho"; Inqaku lama-23, icandelo 4 lichaza ukuba "[e] uqobo unelungelo lokwenza kunye nokujoyina imibutho yabasebenzi ekukhuseleni iimfuno zakhe"; kunye nenqaku le-27, icandelo 1 lichaza ukuba "[e] uqobo unelungelo lokuthatha inxaxheba kwiindawo zenkcubeko yoluntu, ukuzonwabisa kunye nobugcisa kunye nokwenza inxaxheba kwintlalo yesayensi kunye neenzuzo zayo."
Ku- NAACP v. Alabama , iNkundla ePhakamileyo ilawula ukuba urhulumente waseburhulumenteni wase-Alabama akakwazi ukurhoxisa i-NAACP ukuba isebenze ngokusemthethweni kuRhulumente.
E- Edwards v. South Carolina , iNkundla ePhakamileyo iyalawula ukuba ukuboshwa kwamatyala omanyano kubambiswano kubambiswano lokuqala.
KwiTinker v. Des Moines , iNkundla ePhakamileyo ixhasa amalungelo okuQiniswa koQuqesho lwabafundi abadibanisa nokubonisa izimvo kwiikampus zikarhulumente zemfundo, kuquka iikholeji zaseburhulumenteni nakwiiyunivesithi.
Ngaphandle kwe-1988 iDemocratic National Convention e-Atlanta, eGeorgia, izikhululo zokuthotyelwa komthetho zakha "indawo yokubhikisha ekhethiweyo" apho ababhikishi bakha khona. Lo ngumzekelo wokuqala weengxoxo "zenkululeko yokuthetha inkululeko" eya kuthi ithandwe ngokukhethekileyo ngexesha lolawulo lwesibini lwe-Bush.
Ngenkomfa ye-World Trade Organisation eyayise Seattle, eWashington, amagosa okuthotyelwa komthetho axhomekeke kumanyathelo okuthintela okujoliswe ekunciphiseni umsebenzi okhuselekileyo wokubhikisha. Le miqathango ibandakanya i-block block ye-50 ecaleni kwenkomfa ye-WTO, i-7pm ekhawulezileyo kwimibhikisho, kunye nokusetyenziswa okukhulu kwezopolisa ezingekho phantsi kwamandla. Phakathi kuka-1999 no-2007, isixeko sase-Seattle savuma i-$ 1.8 yezigidi ekuhlaleni imali kwaye sashiya izivakalisi zababhikishi abanjwe ngexesha lomcimbi.
UBill Neel, umsetyenzana wasechtshirenti wasePittsburgh, uzisa uphawu lokulwa noBush kwiSiganeko soMsebenzi weSabasebenzi kwaye ubanjwe ngenxa yezizathu zokuziphatha kakubi. Ummeli wezithili zengingqi wenqaba ukutshutshisa, kodwa ukuboshwa kwenza iintloko zelizwe kwaye kubonise ukukhathazeka okukhulayo kwiindawo zokuthetha ezikhululekile kunye nemimiselo yokukhutshwa kweenkululeko zoluntu.
E-Oakland, eCalifornia, amapolisa ahlasele ngokukhawuleza abambhikishi abambisene nokunyakaza kwe-Occupy, bawahlambela ngeenqwelo zeerubha kunye neerhasi ezinqabileyo. I-dolophu kamva icela uxolo ngenxa yokusetyenziswa kakubi kwamandla.
5 ii-Super PACs zokubukela ngo-2016 uMongameli woMongameli
Inyaniso Ngomhlaba Wezinto ezingaziwa
Yintoni i-Fairway kwi-Hole Hole?
Indlela yokufumana iziCwangciso zakho zezifundo ezenziwe ngokukhawuleza
Ukuguquka Kwemozulu Ehlabathini Lonke kunye noVuquko
Umqhubi wezorhwebo - iBhonasi yezorhwebo
Indlela yokuPenda ngeGlasi ukuze ibonakale ingabonakali